Chelmo - ချစ်လေးကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ လုပ်မိလိုက်တဲ့ အချက်များ ...
ချစ်လေးကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ လုပ်မိလိုက်တဲ့ အချက်များ ...
ချစ်စရာကောင်းပြီး ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်လှနေတဲ့သူ့ကို ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ လုပ်မိလိုက်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
၀၁. ကိုယ့်ချစ်လေးအကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတွေကြား အရမ်းကြွားလိုက်မိတယ်။
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရည်းစားလေးရလာပြီဆိုတော့ သူ့အကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောရတာ အမောပါပဲ။　သူငယ်ချင်းတွေတော့ မသိဘူး။ မိန်းကလေးဖြစ်သူကကော ကိုယ့်အကြောင်းကို သူများလိုက်ပြောနေတဲ့အခါ ကြိုက်ပါမလား။　၂ယောက်တည်းကြားက နားလည်မှုတွေနဲ့ သဘောတူညီချက်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါ သူများလိုက်ပြောနေရင်တော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
၀၂. သူ့ပုံတွေကို တင်ပြီးရင်တင်တော့ ဘာဖြစ်မလဲ။
သူနဲ့အရမ်းချစ်ကြတဲ့အကြောင်းကို Facebook မှာတင်ပြီးရင်တင်တဲ့သူရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်သူမှာတော့ သူ့ပုံတွေ Facebook မှာပလူပျံနေရင် ရှက်စရာကောင်းသလို၊ လုံခြုံရေးလည်း စဉ်းစားစရာရှိလာပါတယ်။　Tag နဲ့တင်ပြင်ရင်လည်း မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့် အချစ်လွန်နေရင် မိန်းကလေး အချင်းချင်း အမှန်းတရားက မနာလိုမှုအဖြစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
၀၃. လျှောက်လည်တဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်း အရှိန်တွေ မတတ်စေပါနဲ့။
သူနဲ့ လျှောက်လည်ရတော့မယ်ဆိုရင် တွေးတာနဲ့တင် ပျော်လို့မဆုံးပဲ၊ အဲဒီနေ့မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြီး အစီအစဉ်တွေဆွဲပြီး တခုပြီးတခုလုပ်မယ်လို့ တွေးပြီးပျော်နေတတ်ပါတယ်။　ဒါပင်မဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်သူက ယောင်္ကျားလေးအနောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်နိုင်လောက်အောင် အားမရှိတတ်ပါ။ ဒါကြောင့် လျှော်လည်မယ်ဆိုရင် သူ့အတွက်လည်း စဉ်းစားပေးလိုက်ပါ။
၀၄. အမြဲတမ်း ပိုက်ဆံတွေထုတ်မနေပါနဲ့။
သူ့အတွက် အမြဲတမ်း ဘာသွားသွား၊ လာလာ၊ ဘာစားစား ရှင်းရင်တော့ ကြာရှည်မှာတော့ မကောင်းပါ။ သူဌေးဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။　အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဒေဝါရီ ခံသွားရမယ့်အပေါက်ကို ကြိုမြင်ပါတယ်။ သူတလှည့်၊ကိုယ်တလှည့်က အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
၀၅. လက်ဆောင်ပေးတိုင်းလဲ မကောင်းပါ။
လက်ဆောင်တွေချည်းပဲ ပေးနေရင် မွေးနေ့၊ Anniversary တွေ အချိန်ရှိတိုင်းသာ ပေးနေရင်တော့ လက်ဆောင်ပေးရင်တောင် ပျော်စရာကောင်းတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
၀၆. ကိုယ်လိုချင်သော ပုံသွင်းတာကို သတိထားပါ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့်လည်း အချစ်ပိုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိမှာပါ။　မိန်းကလေးလည်း လူဖြစ်သလို၊ ခံစားချက်တွေရှိပါတယ်။ သူ့ကိုတန်ဖိုးထားရင် သူ့ဝတ်ချင်တဲ့အတိုင်း ၊ သူ့ရဲ့စတိုင်ကို ဦးစားပေးလိုက်ပါ။　အကယ်၍ ကိုယ်ကဝတ်တွေချင်တဲ့ အဝတ်အစားရှိရင်လည်း လက်ဆောင်ပေးကြည့်လုိုက်ပါ။
၀၇. စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်မှုတွေကို မဖြစ်ပါစေနဲ့။
သူ့ကိုပျော်စေချင်တယ်ဆိုပြီး တဖက်သတ်ချည်း စကားတွေပြော၊ တရားတွေပေးလုပ်နေရင်တော့ ကြာရင်မိန်းကလေးဖြစ်သူက စိတ်ညစ်လာပါလိမ့်မယ်။　အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဆိုသလို၊ သတိထားပြီး နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ ရေရှည် အဆင်ပြေအောင် အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားရမှာပါ။
အပေါ်က အချက်တွေနဲ့ ဘယ်နှစ်ချက်ကိုက်သလဲဆိုတာကို စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်နော်။
Credit Photo. tabi-labo
Copyright © 2018 Chelmo. All Rights Reserved.